Geomembranes HDPE malefaka
HDPE malama 40mil-1.0mm
HDPE malama 50mil-1.2mm
HDPE malama 60mil-1.5mm
HDPE malama 80mil -2.0mm
Tantara be voninahitra
Tetikasa tonelina sy lalana
Trano & Tafo
Tetikasa tohodrano sy farihy
Nahoana ny HDPE Geomembrane no malaza amin'ny fametahana dobo
Miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknolojia, vokatra isan-karazany amin'ny indostrian'ny plastika no nivoatra ary iray amin'izy ireo ny Geomembrane. Ny geomembrane HDPE dia heverina ho tena ilaina amin'ny fanaraha-maso ny fifindran'ny fluid amin'ny tetikasa nataon'olombelona. Izy ireo dia vita amin'ny akora synthetic a...
Ahoana ny fomba hanaovana ny kianja golf sy ny dobo tsy tantera-drano?
Sarotra amin'ny fitazonana rano ny dobo sy farihy maromaro eran'izao tontolo izao. Matetika ny safidy mora indrindra dia ny mametraka ny dobo amin'ny kianja golf miaraka amin'ny liner geomembrane avo lenta. Amin'ny maha mpanamboatra polymère matihanina amin'ny karazana dobo rehetra, Trump Eco off...
Mamorona fahafahana bebe kokoa ny Foara Ara-barotra
Ny 12th International Building and Decor Materials Expo natao tao Kunming, Yunnan ny 29 ka hatramin'ny 31 Jolay 2021. Ny fampirantiana dia mizara ho efitrano teknolojian'ny rano ao an-tanàna, efitrano angovo maitso, efitrano fitahirizana polymère tsy tantera-drano, trano fanorenana trano siansa sy teknolojia, varavarana ary ... .
FANORENANA SYSTEMS ANTI-SEEPAGE HO AN'NY INDRINDRA FAHAGAGANA PHOSPHOGYPSUM
Miaraka amin'ny fivoaran'ny indostria haingana, ny loto sy ny fahasimbana amin'ny tontolo iainana dia mihamafy hatrany. Ny olana ara-tontolo iainana toy ny fandotoana entona mandatsa-dranomaso, ny fandotoana ny rano ary ny metaly mavesatra be loatra amin'ny tany dia olana ara-tontolo iainana mahazatra atrehin'izao tontolo izao. Es...
Ny sandan'ny anjara Cheng Du Grain Group Co., Ltd.
nataon'ny admin tamin'ny 21-04-13
Ny fiarovana ara-tsakafo no fototry ny fampandrosoana ara-toekarena. Ny fitehirizana voamaina dia manana fepetra avo lenta amin'ny tsy fisian'ny hamandoana sy ny tsy fahampian'ny trano fanatobiana entana. Ny coils asfalta SBS nentim-paharazana dia manana loza lehibe amin'ny afo mandritra ny dingan'ny fananganana. Ho an’ny fanamboarana ny...
Mpamatsy fitaovana tsy tantera-drano ho an'ny Cheng Du 2021 FISU World University Games
nataon'ny admin tamin'ny 21-03-23
Hatao ny 18 aogositra 2021 any Chengdu, tanàna niavian'ny panda ny Universiade faha-31. Ny sandan'ny anjara Trump Eco Technology Co., Ltd. dia orinasa eo an-toerana ao Chengdu. Niorim-paka tao amin'ny indostrian'ny rano nandritra ny 35 taona mahery. Miaraka amin'ny kalitao tsara sy ny serivisy tsara dia nahazo ny fankasitrahana sy fahatokisana ny ...
Ny tsenan'ny polyethylene avo lenta dia mitombo amin'ny faran'ny taona 2026
nataon'ny admin tamin'ny 21-01-22
Ny tsenan'ny HDPE eran-tany dia mitentina 63.5 miliara dolara amin'ny taona 2017 ary antenaina hahatratra 87.5 miliara dolara amin'ny taona 2026, miaraka amin'ny taham-pitomboana isan-taona eo amin'ny 4.32% mandritra ny vanim-potoana vinavina. Polyethylene avo lenta (HDPE) dia polymer thermoplastic vita amin'ny ethylene monomer vita amin'ny nat...
Ny tsenan'ny geomembrane avo lenta polyethylene (HDPE) avo lenta, anton-javatra fampandrosoana, fotoana farany ary vinavina 2027 | GSE Holdings, AGRU, Solmax, JUTA
Los Angeles, Etazonia: Ny tatitra momba ny tsenan'ny Geomembrane Global High Density Polyethylene (HDPE) dia manome faharanitan-tsaina tsara ahafahan'ny mpandray anjara amin'ny tsena hifaninana tsara amin'ireo mpifaninana mafy indrindra mifototra amin'ny fitomboana, ny varotra ary ny antony lehibe hafa. Ho fanampin'ny dinamika tsena lehibe (anisan'izany ...
Amin'ny taona 2026, hahatratra 45,25 miliara dolara ny tsenan'ny fitaovana geosynthetic; fampiasana faobe ny fitaovana fanorenana maharitra hampiroboroboana ny fitomboana: Fortune Business Insight™
Aprily 2, 2020, Pune (GLOBE NEWSWIRE)-Hahazo ny saina ny haben'ny tsenan'ny fitaovana geosynthetic manerantany noho ny fitomboan'ny fampiasana fitaovana fanorenana maharitra. Ny rafitry ny tany dia mampihena ny fampiasana akora voajanahary (toy ny aggregate sy fasika), ka manamora ny asa fanorenana...
nataon'ny admin tamin'ny 21-01-12
Ny fampiasana ny Daelim HDPE Geomembrane dia mety hiteraka fitrandrahana mamokatra kokoa. Ny dingana vaovao amin'ny fomba fanangonam-bokatra amin'ny fitrandrahana metaly sarobidy amin'ny fampiasana vahaolana simika dia nahatonga ny fitrandrahana mora vidy avy amin'ny akora ambany. Ny fampiasana liner Daelim Geomembrane malefaka dia manakana ny fandotoana ...
Ny toeram-piompiana tanky dia amboarina mba hisorohana ny fahalotoan'ny rano amin'ny tany raha misy fiparitahan'ny simika. Ny rafitra fitahirizana faharoa dia azo apetraka amin'ny simenitra na mivantana amin'ny tany. Ireo rafitra liner ho an'ny fitahirizana faharoa ireo dia mety ho be pitsiny indrindra amin'ny fampiasana fametahana be pitsiny amin'ny tank sy ot ...
HDPE Geomembranes dia ampiasaina amin'ny satroka fanariam-pako mba hisorohana ny fikorianan'ny rano ao anaty fako, ka mampihena na manafoana ny famokarana ranon-javatra aorian'ny famenoana ny fako. Ny satroka ihany koa dia natao hamandrika sy hamoahana araka ny tokony ho izy ny entona ateraky ny fako organika. Doka iray hafa...
Trump Eco Technology Co., Ltd. dia orinasa lehibe miompana amin'ny fikarohana, famokarana ary fivarotana fitaovana geosynthetics sy macromolecules tantera-drano.
Adiresy: No.32, trano birao dishumeiling, Jinke Road, Jinniu District, Chengdu, Sina 610036